Umaka: izikhangiso zevidiyo | Martech Zone
Umaka: izikhangiso zevidiyo
I-TikTok iyindawo ehamba phambili yevidiyo ephathekayo enefomu elifushane, enikezela ngokuqukethwe okuthokozisayo, okuzenzekelayo nokwangempela. Akungabazeki kangako ngokukhula kwayo: Izibalo ze-TikTok TikTok inabasebenzisi abasebenzayo abasebenza nyangazonke abayizigidi ezingama-689. Uhlelo lokusebenza lwe-TikTok lulandwe izikhathi ezingaphezu kwezigidigidi ezi-2 ku-App Store naku-Google Play. I-TikTok ibalwa njengohlelo olulandwe kakhulu kunazo zonke ku-Apple App ye-Apple ye-Q1 2019, enokulandwa okungaphezu kwezigidi ezingama-33. 62 amaphesenti
U-2021 uzowenza noma awuphulele abashicileli. Unyaka ozayo uzophinda kabili ingcindezi kubanikazi bezindaba, futhi ngabadlali abanobuhlakani kuphela abazohlala bethe njo. Ukukhangisa nge-Digital njengoba sazi ukuthi kuzophela. Sithutheleka emakethe ehlukaniswe kakhudlwana, futhi abashicileli badinga ukucabanga kabusha ngendawo yabo kulesi simiso semvelo. Abashicileli bazobhekana nezinselelo ezibucayi ngokusebenza, ubunikazi bomsebenzisi, kanye nokuvikelwa kwemininingwane yomuntu siqu. Ukuze
NgoLwesibili, Januwari 2, 2018 NgoLwesibili, Januwari 2, 2018 Douglas Karr
I-AdCreator yakhiwe ngezinto ezingaphezu kuka-50 ezithuthukisiwe zokudonsa nokudonsa kanye nezinto ezingaphezu kwezingama-200 ezihloliwe ngaphambilini, izici ezenziwe ngokwezifiso zokwenziwa kwezikhangiso. Ama-templates akhelwe ngaphakathi asheshisa ukwakhiwa, ukuthuthukiswa, futhi aqinisekise ukungaguquguquki, kufaka phakathi i-Store Locator, i-Inline Video Player, ama-Galleries, Ukwabelana Komphakathi nokuningi. Zonke izingxenye nezici ze-AdCreator zivivinywa kuwo wonke amadivayisi, izinhlelo ezisebenzayo, nezindawo. I-AdCreator nayo inezilawuli zokuqinisekisa ikhwalithi ezakhelwe ngaphakathi ezizenzakalelayo, ngakho-ke uyazi ukuthi yini oyibonayo yilokho umsebenzisi okuyikho
NgoLwesibili, ngoJulayi 4, i-2017 NgoMgqibelo, July 8, 2017 Douglas Karr
IClipcentric inikezela abasebenzisi bayo ngamathuluzi nezifanekiso ezikhethiwe eziningi ezinikeza ukulawula okuphelele kuzo zonke izinyathelo zenqubo yokukhiqiza okuholela ezikhangisweni zemithombo yezindaba ezicebile ezisabelayo. Amaqembu esikhangiso angakha ngokushesha futhi athuthukise izikhangiso ezinamandla ze-HTML5 ezisebenza ngaphandle komthungo kunoma iyiphi indawo. Hudula udedele indawo yokusebenza - Ngokudonsa ngokuqondayo bese uphonsa izingxenye zesikhangiso ezindaweni zokusebenza eziqondene nedivayisi ukuze ulawulwe ngokuphelele, futhi lapho okubonayo yilokho okutholayo. I-Robust HTML5 Authoring - Khiqiza
I-Vungle: Yenza imali ngohlelo lwakho lokusebenza lweselula ngamavidiyo angaphakathi nohlelo
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 7, i-2017 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 7, i-2017 Douglas Karr
Isikhala sohlelo lokusebenza lweselula sinokuncintisana impela futhi nezinsuku zokwakha uhlelo lokusebenza, ukukhokhisa izinkulungwane zemali, futhi ukulindela ukuthola imbuyiselo yakho ekutshalweni kusekude kakhulu nathi ezimbonini eziningi. Kodwa-ke, ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo nokukhangisa okungaphakathi nohlelo kuyaqhubeka nokusiza ekwenzeni imali ngokutshalwa kwezimali okumangalisayo abathuthukisi bomdlalo nabasetshenziswayo. UVungle ungomunye wabaholi kule mboni, enikeza abashicileli i-SDK enamandla yezikhangiso zamavidiyo ezisebenzisanayo
Uhlu Lwesilinganiso Esijwayelekile Sezikhangiso Zokukhangisa Ku-inthanethi
NgoLwesibili, ngoJulayi 21, i-2015 NgoMsombuluko, Okthoba 12, 2015 Douglas Karr
Amazinga ayimfuneko uma kukhulunywa ngesikhangiso soku-inthanethi nosayizi wokubizela esenzweni. Amazinga anika amandla ukushicilelwa okufana nokwethu ukulinganisa amathempulethi ethu futhi kuqinisekiswe ukuthi ukwakheka kuzokwamukela izikhangiso okungenzeka ukuthi abakhangisi sebevele bazenzile futhi bazihlola kuyo yonke inetha. Njengoba i-Google Adwords ingumpetha wokubekwa kwezikhangiso, ukusebenza kwesikhangiso sokukhokha ngokuchofoza ngakunye ku-Google kulawula imboni. Osayizi Bezikhangiso Abenza Phezulu ku-Google Leaderboard - amaphikseli angama-728 ububanzi ngamaphikseli angama-90 amade uhhafu wekhasi -
Okungaphezu kwengxenye yazo zonke izikhangiso emakhasini evidiyo kubonakala kuyo yonke iwebhu, isimo esinzima kubakhangisi abanethemba lokusebenzisa ithuba lokubukwa kwevidiyo okukhulayo kuwo wonke amadivayisi. Akuzona zonke izindaba ezimbi… ngisho nomkhangiso wevidiyo olalelwe kancane usenomthelela. AbakwaGoogle bahlaziye izinkundla zabo zokukhangisa ze-DoubleClick, Google kanye ne-Youtube ukuzama ukubona izinto ezisiza ukunquma ukubukeka kwalezo zikhangiso zamavidiyo. Ini
NgoLwesithathu, Septemba 25, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izinyathelo ezibonakalayo zibonelela ama-ejensi nemikhiqizo emikhulu nethuba lokusabalalisa okuqukethwe kwabo kubabukeli abafanele. Ingxenyekazi yabo ifinyelela ababukeli bamavidiyo abangaphezu kwezigidi ezingama-380 njalo ngenyanga. Kuze kube manje, balinganise ukubukwa kwamavidiyo we-3 trillion, amavidiyo angaphezu kwezigidi ezingama-500, nemikhankaso engaphezu kuka-10,000 yokukhangisa ngamavidiyo. Izinyathelo ezibonakalayo ziletha isikhangiso sevidiyo esisekelwe ekukhetheni okulungile kumuntu ofanele ngesikhathi esifanele kumshicileli ofanele, sisiza abakhangisi bomkhiqizo ukuthi balwe nokwehlukaniswa kwemidiya ngenkathi basebenzisa